Tena Digest siansa tontolo iainana
в Vaovao momba an'izao tontolo izao, siansa, vaovao, fahitana, tontolo iainana
Source: Vaovao momba ny fiarovana ny sakafo
Tags: fonosana biodegradablefonosana plastika ny legiomaСингапурfonosana ho anana
Mampiditra fandrarana ny fivarotana voankazo sy legioma amin'ny fonosana plastika i Frantsa
Nametraka fandrarana tsy hivarotana legioma sy voankazo amin'ny fonosana plastika ny governemanta frantsay. Ny lisitra hatreto dia nahitana entana 30: leeks, ...
Greenpeace dia namporisika an'i Russia handao ny fonosana voajanahary
Ny sampana Rosiana Greenpeace dia nanentana ny manampahefana rosiana handao ny fikasana hanolo ny entana plastika, kaontenera ary fonosana amin'ny safidy biodegradable. Taratasy mifanandrify ...
Denmark dia te-hanao fonosana sakafo azo alaina avy amin'ny kofehy amin'ny raokandro
Bioengineers avy amin'ny Ivotoerana Teknolojia Danoa dia namoaka ny tetikasa SinProPack manavao mba hanomezana fonosana entina azo entina any amin'ny firenena. Raha ny filazan'izy ireo ...
Ny fonosana sary dia namorona fonosana boaty vaovao ho an'ny legioma sy voankazo
Ny orinasa amerikanina Graphic Packaging dia namolavola ny ProducePack Punnet, karazana baoritra vaovao mahavariana amin'ny fonosana plastika ho an'ny voankazo sy legioma vaovao, momba izany ...
Vokatra vaovao. Vokatra mialoha.
Efa miha-bary ny ovy be, na karaoty ihany - any Ozbekistan ihany. Famintinana tsena mandritra ny herinandro faha-35 amin'ny 2019